Qiyaasta Kardashov. Heerka horumarka tikniyoolajiyadda ilbaxnimada | Saadaasha Shabakadda
Qiyaasta Kardashov. Heerka horumarka farsamada ilbaxnimada
Waxaan dhawaan daabacnay tilaabooyinka cusub ee NASA ay higsaneyso inay gaarto, iyada oo ujeedadu tahay in asteroid ka weecdo dariiqiisa si aan loogu garaacin dusha sare ee meeraheenna. Isaga heerka horumarka horumarka farsamada in ilbaxnimadeennu gaadhayso waa wax ka yaab badan. Marka laga soo tago ilaalinta dhulkeenna, iyo in kastoo ay jiraan waxyaabo la qabanayo, tikniyoolajiyadda ayaa sii socota.
Maanta waxaan ka hadlaynaa miisaanka uu hindisay cirbixiyeenka reer Russia Nikolai Kardashov sanadkii 1964. Nikolai sharaxay 3 nooc oo ilbaxnimo oo jiri kara, iyadoo loo eegayo heerka horumarka laga yaabo inay gaareen. Tobaneeyo sano ka dib, aqoonyahan Mareykan ah oo ku takhasusay cilmiga mustaqbalka Michio Kaku, wuxuu dhexgeli lahaa 3 ilbaxnimo oo dheeri ah. Guud ahaan, 6 noocyada ilbaxnimada kala duwan. Si aad fikrad uga hesho halka ay kuweena joogaan, uma baahnid inaad niyad jabto, laakiin waxaan ku jirnaa nooca 0. Waxaan joognaa 0,72, marka loo eego xisaabinta la qaaday si loo cabbiro horumaradaas, waxaan gaari karnaa nooca 100 illaa XNUMX sano.
1 Xagee joognaa hada?
2 Noocyada Ilbaxnimada
2.1 Nooca I Ilbaxnimada
2.2 Nooca II Ilbaxnimo
2.3 Nooca III Ilbaxnimo. Bulshada Galactic
2.4 Nooca IV Ilbaxnimo
2.5 Nooca V Ilbaxnimo
2.6 Nooca VI Ilbaxnimada
Xagee joognaa hada?
Ilbaxnimadeenu wali way ka hooseysaa Nooca 0aad. Waxaan kaliya awood u leenahay inaan ka faa'iideysano xoogaa tamar ah oo laga heli karo Dhulka. Sababtaas awgeed, xaaladda ilbaxnimadeenna waxaa loogu magac daray Nooca XNUMX. Carl Sagan, caan caan ah sayniska oo si ballaaran loogu aqoonsan yahay qayb ka mid ah taxanahiisa telefishanka "Cosmos", oo ka mid ah buugaag badan oo caan ah waxay qabteen xisaabinta ilbaxnimadayada, iyadoo la adeegsanayo qaaciddada uu hindisay Kardashov. Halkaas 0,7 waa la jaray taas oo xisaabisay, weliba, dib u isticmaalka tamarta ee la gaadhay tan iyo markaas.
Michio KakuDhanka kale, xisaabiyay waqtiga lagama maarmaanka ah ee ay nagu qaadanayso inaan u gudubno nooc kasta oo ilbaxnimo ah, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 100 ilaa 200 sano in la aado Nooca I. Dhowr kun oo taga Nooca II iyo inta udhaxeysa 100.000 sano ilaa milyan ee Nooca III.
In kasta oo ay u muuqato mid ka baxsan sheekooyinka sayniska, Waxaa raadiyay qiiqa galactic infrared qiiqa, calaamadaha ilbaxnimada kale. in 2015 lama helin raadad ka mid ah noocii ilbaxnimo ee III. Si kastaba ha noqotee, qaab la yaab leh oo iftiinka iftiinka ku wareegsan xiddigga KIC 8462852 ayaa soo jiitay. Sahamintii ayaa kor loo qaaday mala-awaal ku saabsan inay noqon karto Dyson Sphere. Qaab-dhismeedka megastarigga meeraha ah, ee gacan 1 AU (masaafada u dhexeysa Dunida iyo Qorraxda).
In kasta oo Noocyada Ilbaxnimada ee qiyaasta Kardashov ay yihiin 3, waxaan soo bandhigi doonnaa illaa 6aad.
Nooca I Ilbaxnimada
Wac "Planetary Society". Ilbaxnimada Noocan ah ayaa awood u leh isticmaal awoodda buuxda ee meerahaaga. Waxay awood u leedahay inay wax ka bedesho cimilada, wax ka bedesho dariiqa dhul gariirka iyo fulkaanaha. Waxay ka faa'iideysan kartaa tamarta waxa loogu yeero "antimatter", iyo horumarinteeda tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay noqon doontaa mid aad u horumarsan oo wax ku ool ah. Waxay saameyn ku yeelan kartaa dhirta iyo duunyada adduunka markay doonaan. Qiyaasta isticmaalkeeda tamarta saa'idka ah waxaa lagu dejiyay 10 tiriliyan marka la barbar dhigo Nooca 0.
Nooca II Ilbaxnimo
10 bilyan jeer ayaa ka awood badan Nooca I, waxay awood buuxda u leedahay inay ku xirto tamarta wadarta xiddigta waalidkeed. Waxaad gumeystay meerayaasha kale ee ku jira qoraxdaada. Waxay awood u leedahay inay u safarto nidaamyada kale ee iyaga ku dhow. Dheeraad ah, wuxuu awood u leeyahay xitaa dhisida Dyson Sphere (mala awaal, waa midka aan tusno tusaale ahaan fiidiyaha soo socda) oo ku hareerayn lahaa nidaamkeeda oo dhan, si looga faa'iideysto tamarta xiddigtiisa loona wareejiyo meeraha u baahnaa. Haddii xiddigoodu qarxi lahaa, aakhirka way xannibi lahaayeen oo ka baxsan karaan iyagoo ka hayaamaya qorraxdooda iyo mid kale. Waxay sidoo kale gacanta ku hayn lahaayeen meydadka kale iyo meerayaasha.
Nooca III Ilbaxnimo. Bulshada Galactic
Ilbaxnimada noocan ah, sidoo kale loo yaqaan Ilbaxnimada Galactic. Waxay leeyihiin awood u leh inuu ka faa'iideysto tamarta buuxda ee galax-gaaga. Waxay si buuxda u fahmi lahaayeen tamarta. Waxay ku guuleysan lahaayeen nidaamyo badan oo qoraxda iyo waxay si xor ah ugu socon karaan inta u dhexeysa galaxyada. Waxaa la qiyaasayaa in kala bar ilbaxnimo iyo cybernetic ilbaxnimo laga helay si uun, oo ay caawisay aalado. Waxay ka koobnaan karaan supernovae si aysan u qarxin. Laguu malaynayo sidoo kale waa inay awoodaan inay xakameeyaan dirxiga.
Nooca IV Ilbaxnimo
Ninkani waa inuu noqdaa awood u leh inay ka faa'iideysato dhammaan tamarta koonka ku jirta, iyo inaad awood u yeelatid inaad si xor ah ugu dhex socoto. Waxaa la qiyaasayaa in xitaa ilbaxnimooyinkani ay hoy ka heli karaan godadka madow ee aadka u weyn. Wax ay adag tahay in la qiyaaso. Shuruucda jir ahaaneed ee ay ogaan lahaayeen weli ma naqaan. Waxaa lagu gartaa maxaa yeelay Waan maamuli kari lahaa boos / waqti.
Nooca V Ilbaxnimo
Ka tagida caqliga saliimka ah. Ilbaxnimada noocan ah waxay ka faa'iideysan kartaa tamarta caalamyo badan. Tani durba waa metaphysical badan. Waxaan ka safri lahaa hal adduun ilaa mid kale, iyo aqoonta ay lahaan lahaayeen waxay noqon laheyd mid aad u weyn oo ay lama huraan tahay in laga fikiro in anaga ahaan ay noo noqoneyso wax la mid ah ilaahyo. Waxay lahaan lahaayeen awood ay ku maareeyaan qaabdhismeedka dhabta ah.
Nooca VI Ilbaxnimada
Iyo ka baxsan xakamaynta dhammaan iskudhafka isbarbar dhiga, iyo qaabdhismeedkooda, halkee ayuu tagi karaa? Ilbaxnimada noocan ah waxay heli lahayd magangelyo ka baxsan waqtiga iyo booska. Waxay abuuri karaan waxna burburin karaan markay doonaan dunidu, laakiin waa kuwo badan. Waa wax aan la taaban karin sida loo qeexo, waxay noqon lahaayeen wax walba awood iyo meel kasta ku joogo.
Caalamka, in kastoo ay umuuqato mid kale, waxaan hada uun bilownay inaan fahanno kaliya qayb yar oo kamid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Qiyaasta Kardashov. Heerka horumarka farsamada ilbaxnimada
Ma run baa in ka sareysa ay yartahay oksijiin?
Isbedelka cimiladu wuxuu keenaa wareegga taban ee Amazon